Beddelka: Goobaha ugu Fiican ee La Isbarbardhigo Software Bilaash ah iyo Furfuran | Laga soo bilaabo Linux
Beddelka: Meelaha ugu wanaagsan ee lagu ogaado oo la barbardhigo Software-ka Bilaashka ah
Marka ay timaado boggaga internetka inaad aqriso oo aad ogaato wararka xaqiiqada ah Software (Nidaamyada Howlgalka, Codsiyada iyo Madal) wax ka fiican ma jiro Blogs, iyo markay tahay Software Bilaash ah, Isha Furan iyo GNU / LinuxHagaag, xitaa inbadan.
Blogs sida kuweenna, Laga soo bilaabo Linux, iyo kuwo kale oo badan, ayaa heer sare ah ilaha macluumaadka in lala socodsiiyo meelahaas. Laakiin, marka lagu daro inaan cusbooneysiinno waxaan rabnaa inaan isla waqti baarno beddel wanaagsan jira barnaamijyada aan aqrinayno, maadaama ay jiraan goobo fududeynaya howlahaas. Sidaa darteed, maanta waxaan baari doonnaa qaar si aan u aragno kuwa sida ugu habboon ugu habboon qof kasta baahidiisa.
Horeba waagii hore, waxaan si toos ah ugusoo hadal qaadnay qodobkaan markaan kahadleyno Furan, kaas oo, inkasta oo aysan ahayn dhab ahaan in la isbarbar dhigo Codsiyada Barnaamijka Bilaashka ah laakiin Mashaariicda Isha Furan, sidoo kale waxay u adeegtaa hawshan iyada oo loo marayo qalabkeeda isbarbar dhiga yar ee la dhisay: Isbarbar dhig Mashaariicda.
Waxaa mudan in la xasuusto oo la muujiyo kuwa xiiseynaya Furan, taas oo ah sida laga soo xigtay adiga degel rasmi ah:
"AMABulsho khadka tooska ah iyo tusaha guud ee Bilaashka iyo Furfuran Ilaha Software (FOSS), oo bixisa falanqeyn iyo adeeg raadin si loo ogaado, loo qiimeeyo, loola socdo loona isbarbardhigo furaha ilaha furan iyo mashaariicda Markii la heli karo, waxay kaloo bixisaa macluumaad ku saabsan dayacanka iyo shatiyada mashruuca".
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Furan, dhamaadka aqrintaan waxaad riixi kartaa kan xiga post la xiriira hore:
1 Shabakadaha internetka si aad u raadiso beddelaadyo bilaash ah oo furan
1.1 Raadi bedello Isbaanish ah
1.1.1 CD bilaash ah
1.2 Raadi waxyaabo kale oo Ingiriis ah
Shabakadaha internetka si aad u raadiso beddelaadyo bilaash ah oo furan
Raadi bedello Isbaanish ah
In kasta oo Isbaanish ah, waxaa jira goobo aad u yar oo noocan ah, 3da ugu waxtar badan uguna caansan ee aan helnay waxay ahaayeen:
Websaydh halyeeyo ah oo ka kooban barnaamijyo bilaash ah, furan, oo bilaash ah. Waxay asal ahaan ka soo jeedaa Isbaanishka iyo in la fududeeyo hawlaha isbarbar dhigga ama raadinta barnaamijyo kale ama kuwo la mid ah, waxay u kala qaybisaa qaybo ka mid ah kuwa waaweyn oo sii kordhaya Katalogi Software Bilaash ah.
Markaad geleyso a Qeybta, tusaale ahaan, Graphics ka dibna gudaha Tifatirayaasha Sawirka, ayaa ina wada tusaysa software la mid ah oo aan u adeegsan karno inaan ku fulino howlo isku mid ah, halka mid walba, ay na siineyso xiriiriyeyaal macluumaad kala duwan si aan si qoto dheer u ogaanno.
(Furan Shabakad Horumarineed) Sidoo kale waa degel leh sannado badan oo khadka tooska ah oo asal ahaan iyo badiyaa bixiya adeeg bilaash ah oo loogu talagalay horumarinta barnaamijyada furan ee furan. Adeegyadan waxaan ka xusi karnaa: Taageerada keydadka kala duwan iyo liiska boostada, iyo kuwo kale oo badan, si loogu bixiyo maareyn sahlan oo dhameystiran mashaariicda diiwaangashan.
Intaa waxaa dheer, waxay leedahay a Khariidadda Barnaamijka taas oo la kulanta ujeedo iyo astaamo isku mid ah Katalogi Software Bilaash ah lagu sharaxay CD bilaash ah. Tusaale ahaan, waa inaad riixdo Mawduucyada, Multimedia-ka, Sawirada iyo Tifaftirayaasha, si loo helo natiijo la mid ah tan CD bilaash ah.
Ma aha degel ganacsi duug ah, oo sidoo kale asal ahaan ka soo jeeda Isbaanish, oo bixiya adeeg bilaash ah oo bilaash ah, oo diiradda saaraya u fududeynta kuwa xiiseynaya inay raadiyaan, isbarbar dhigaan oo ay doortaan barnaamijka loo baahan yahay. Tan awgeed, waxay kaloo leedahay a Tusaha Software oo loo qaybiyay qaybo aad u wanaagsan.
Si kastaba ha noqotee, ka duwan CD bilaash ah y OSDN, Mashiinka raadinta casriga ahi wuu shaqeeyaa aadna wuu u fiican yahay. Markaa goobid iyo isbarbar dhig waa la samayn karaa dhakhso badan oo waxtar badan. 2 waxyaalood oo muhiim ah oo ku saabsan boggan ayaa ah inay bixiyaan dib u eegis isticmaale (fikrado) iyo waxyaabo kale oo leh Barnaamij gaar loo leeyahay, mid xiran iyo mid ganacsi.
NotaIsbaanishka, sidoo kale waxaa jira degel internet oo kale oo yar oo bixiya mid yar qaybta beddelka taas oo adeegsanaysa bogaggan isbarbardhiga ah, oo Isbaanish iyo Ingiriis ah. Waa la booqan karaa adigoo gujinaya waxyaabaha soo socda isku xirka.
Raadi waxyaabo kale oo Ingiriis ah
Luqadda Ingiriisiga, waxaa jira degello badan oo dheeri ah, oo qaarkoodna horeyba loo ogaan doono oo ay dad badani u isticmaali doonaan. Sababta sababta, waxaan kaliya u sheegi doonaa iyaga in yar, ay u baran doonaan iyaga una isticmaali doonaan si loo gaaro beddelka ugu wanaagsan ee softiweer bilaash ah, furan oo bilaash ah oo loogu talagalay barnaamijyada lahaanshaha, xirnaanshaha iyo ganacsiga. Kuwanuna waa:
Beddelka Barnaamijka Linux
Raadi Beddellada Barnaamijka ee Fiican
Saashub - Beddelka Barnaamijka iyo Faallooyinka
Nota: Inta badan websaydhada ku qoran Ingiriisiga waxaa ka mid ah baaritaan gacmeed oo lagu sameeyo qaybaha oo loo maro mashiin raadin caqli leh.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan bogaggan xiisaha leh ee wax ku oolka ah ee loogu talagalay in lagu faafiyo sofweerrada kala duwan, gaar ahaan nooca «libres y abiertos», oo ka caawiya dad badan fududeynta raadinta beddelaadyo la isku halleyn karo oo ammaan ah oo loogu talagalay Software-ka lahaanshaha, xirnaanta iyo ganacsiga; waa mid aad u daneyn iyo faa iido u leh, dhamaantiis «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Beddelka: Goobaha ugu Fiican ee la Barbardhigo Software Bilaash ah iyo Furfuran